Manni murtii Kaayiroo himannaa perezidaantii duraanii Hosnii Mubaarak irratti dhihaate kuffise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Manni murtii Kaayiroo himannaa perezidaantii duraanii Hosnii Mubaarak irratti dhihaate kuffise
Hosnii Mubaara, perezidaantii duraanii biyya Masrii, hanga kaleessaatti himannaa ajjechaa namoota 239 wolqabatee irratti banameef gara mana murtiitti deddeebi’aa turan. Namoonni kunniin kan du’an yeroo worraqqsi bara 2011 Masrii keessatti adeemaa turetti. Yakki Mubaarak fi kanneen mootummaa isaa tajaajilaa turan irratti dhihaate, yeroo angoo irra turan mormitoota daandii irratti bahanii mormii dhageesisaa turan poolisii fi raayyaan woraanaa biyyattii akka ajjeesaniif ajaja dabrsitaniirtu himannaa jedhuun. Akka labsa mana murtee Kaayirootti hundi isaanii badii raawwatan tokko hinqaban.
Angawoota 7 kanniin mubaarak woliin kan manni murtii himannaa itti dhihaate irraa wolaba taasise.
Murtee manni murtii Kaayiroo dabarse hordofee kanneen Mubaarak deeggaran yoo gammdan, worri isa mormuu fi firooottan worraa lubbuu isaanii dhabanii ni gaddan, ni rifatan. Falmaan mirga namoomaa tokkos murtiin kuni sochii bilisummaaf godhameef kufaatii guddaadha jechuun dubbateera.
Murtii kenname booda, Mubaarak umrii 86, ‘ani badii ykn yakka tokko hinhojjanne’ jechuun dubbate. Mubaarak himannaa himannaa ajjeechaa namootaatiin wolqabatee irratti baname irraa bilisa ta’us, murtii kana dura qabeenya biyyatti faaydaa dhuunfaatiif oolchaniiru jedhuun adabbiin woggaa 3 irratti murtaa’ee ture. Kanaaf jecha, mubaarak ammas hanga tokko manuma hidhaa akka turanitti kan eegamu. Dhimma fayyaa isaaniitiif Mubaaak yeroo ammaa kan argaman hospitaala woraanaa keessatti. Mubaarakii fi Ministera Haajaa Biyya Kessaa kan turan Habiib al-Adlii fi miltoonni isaani jahan biroo bara 2012 adabbii umrii guutuun akka adabaman manni murtii biyyattii murteessee ture. Egaa amma murtii santu geeddarameeti kan himatamtoonni kunniin bilisaan akka gadi dhiifaman taasifame.
Sochii Mubaarak fonqolchuuf bara 2011 godhameen wolqabatee namoota 800 ta’antu akka du’aniidha kan gabaafame. Manni murtii, garuu, dhimma Mubaarak kan ilaalaa ture ragalee nannoo 11 biyya Masrii keessaa wolitti qabame kan du’a namoota 239 fi kanniin madaan adda addaa irra gahe 1,588 tiin.
Kanumaan wolqabatee, manni murtii kuni himannaa Mubaarak irratti dhimma malaanmaltummaan wolqabatee dhihaatee tures kuffiseera. Abbaa qofaa miti kan manni murtii kuni fure; ilmi isaas Gamaal Mubaarak himannaa malaanmaltummaa irratti dhihaate irraa wolaba taasifameera.
Abokaatoon Mubaarak, ‘murtee gaarii qulqullina bulchiinsa Mubaarak mirkaneesse’ jechuun gammachuu itti dhagahame ibseera. Gama birootiin, maatii fi firoottan worra dhumanii, ‘hiyyeessaaf haqni hinjiru,’ jechuun dallansuu isaanii Associated Press itti himaniiru. Akka jecha isaaniitti ammas kan hojjataaru seeruma Mubaarak.
Erga Al-Sisiin angotti bahee as, Televiziyoonnii fi gaazexoonni biyyattii hedduun Mubaarakii fi bulchiinsa isaa balaaleffachuu irraa hara galfataniiru.
Murtii manni murtee Kaayiroo labse kana hordofee worra murtii kana mormuun kan 1000 ta’an hiriira nagaa Addabaabaayii Tahariir geggeessaniiru. Hookkara poolisii fi ummata jiddutti ta’een namoonni 2 du’uun gabaafameera.
Previous articleTalaalliin Iboolaaf fala ta’uu mala jedhame argame
Next articleSiwiizerlaanditti yaaliin laakkofsa baqattootaa woggatti 0.2% akka hincaalle godhuuf qiyyaafate fashale